Dubai Bogga dadka ajnebiga ah ee ku saabsan helitaanka shaqo ee UAE
Waxaa laga yaabaa 13, 2018
Published by Shirkadda Dubai City at Waxaa laga yaabaa 16, 2018
Dubai Blog loogu talagalay dadka ajnebiga ah
Macluumaadka blog ee loogu talagalay dadka ajnabiga ah - Shaqooyinka iyo Xirfadaha
Guud ahaan Dubai City talooyin ku saabsan dhammaan xirfad-yaqaanka
Naftaada meel cusub oo shaqo raadso. Dubai blog waxay kuu keenaysaa dhammaan dhacdooyinka, shirkadaha, qorayaasha, dabbaaldegyada iyo dhacdooyinka gaarka ah ee magaaladan cajiibka ah.
Dubai oo loogu talogalay qurba-joogta caalamiga ah
Dubai Blog, sida xaqiiqda ah, tani waa waxa waxaan ku siineynaa macluumaad guud oo ku saabsan shaqada Dubai iyo Qorista Bariga Dhexe. Iyada oo la adeegsanayo bartayada shaqada bogga, waxaad xitaa ka heli kartaa sida Haweenka carabiga ah wuxuu shaqo ka heli karaa Dubai. Waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan xirfad suuq madow ee Dubai. Gaar ahaan haddii aad tahay dalal cusub oo ka socda wadamada aan la shaqeyneyno. Tusaale ahaan, waxaan nahay oo ay shaqo ka raadinayaan Koonfur Afrika, Hindiya, Pakistan iyo Filibiin. Dhammaantood waxay awoodaan inay helaan shaqooyinka riyadan ee Dubai.
Kuwa shaqo doonka ah ee caalamiga ah waa kuwa lagu soo dhaweynayo Dubai. Gaar ahaan haddii ay yihiin haysashada waxbarasho wanaagsan sida MBA. Waxaad ka heli kartaa shaqo riyo ah UAE. Dhowr shirkadood ayaa shaqaaleysanaya Emirates. Xaqiiqda, si aad u hesho shaqo, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo gaaro. Habka ugu fiican waa in lala xiro shaqaaleeyeyaasha. Baloogyadayada ayaa hubaal kaa caawin kara inaad hesho macluumaad dheeri ah ku saabsan shaqooyinka UAE.
Shirkadeena ayaa sidoo kale qiimeyneysa qorayaasha ee Dubai. Waa maxay wakaaladaha shaqaaleynta ay hadda shaqaaleynayaan UAE. Waxaa intaa dheer, waad ogaan kartaa halkaad u dirto cusboonaysiintaada CV-ga Bariga Dhexe. Maamulayaasha shaqaalaynta sidoo kale hubinta maalin kasta shaqooyin cusub ayaa jira. Annaga oo tan tan maskaxda ku hayna, waxaan isku dayeynaa inaan kula talinno booqdeyaasha cusub meesha ay ku diri karaan resume. Waqti ha ku luminin waqtigaaga goobta shaqada kormeerka waxay leeyihiin eegno sidaan kuu caawin karno.
Maxaad ku samayn kartaa boggayaga loogu talagalay dadka ajnabiga ah?
Hagaag boggayaga waxaad ka akhrisan kartaa adeegyo badan oo loogu talagalay dadka shaqo doonka ah. Xaaladahaas oo kale, waxaan abuuray hagaha macluumaadka dhamaystiran ee loogu talagalay dadka ajnabiga ah. Shirkadeena marwalba way isku dayday kugula talinayaan shaqo raadiyaha caalamiga ah ee ku saabsan shaqo raadinta. Waxaad ka heli kartaa sida loo raadsho shaqo Kooxda WhatsApp. Iyada oo ay weheliso shirkadaha ugu fiican isbarbar dhiga goobaha kale ee shaqada. Duruufahaas oo kale, si gaar ah ayaan ugu leenahay qorista kuwa kale, annaga siiyaan adeeg xirfad shaqo oo cajiib ah mobilada.
Shirkadeena had iyo jeer talooyin ku saabsan sida aad naftaada u geli lahayd shaqooyinka Dubai. iyo macluumaadka shaqada loogu talagalay iyo shaqo doonka UAE. Halkee si aad u heshid goobo shaqo oo fiican oo laga helo Dubai. Marka loo eego shaqooyinka Canshuur-dhaafka ah laga helo UAE. Shirkadeena had iyo jeer waxay talo siisaa dadka shaqo doonka ah. Iyada oo loo siman yahay muhiim in lagala taliyo shaqooyinka ka jira Dubai ganacsiga waa hamigeenna.
Inkastoo tani ay noqon karto mid run ah oo aad awoodid Shaqooyin ka raadso Dubai Dubai shirkad Dubai City. Si aad u dhigto si ka duwan, waad raadsan kartaa Whatsapp Shaqaalaynta ku dhex jirta qormooyinka bartayada. Sida loo maareeyo CV-gaaga shaqooyinka UAE. Helitaanka macluumaadka ku saabsan nidaamka fiisaha ee UAE.
Waxaa intaa dheer, waxaad ku ogaan kartaa sida aad u gaari karto loo-shaqeeyahaaga tooska ah suuqa saamiyada Abu Dhabi iyo Dubai. Sidee si aad u dalbato xirfadda ugu dambeysay ee Google in Dubai City. Sida loo gaaro loo shaqeeyeyaasha Abu Dhabi iyo Sharjah.
Qeybta ugu badan sida loo qoro manhajka wanaagsan. Iyo sida loo meelaynayo shirkadaha ku yaalla UAE. Iyo sida loo isticmaalo kale goobaha shaqo ee Dubai ee shaqo raadinta. Gaar ahaan gudaha Shirkadaha Dubai. Sidoo kale, waad awoodi doontaa inaad ogaato sida looga gudbo waraysiyada socodka ee Dubai. Iyo macluumaad dheeraad ah oo aad u isticmaali karto shaqo raadinta mustaqbalka.
Shirkadda Magaalada Dubai waxaan u qoreynaa shaqaale doonaya
Shaqo iyo shaqo ee Dubai ma fududa in la helo. Dhinaca kale boggaga shaqada, waxaad ka heli kartaa qaybo qiimo leh. Waxaan muujineynaa xoog leh fiiri shaqo raadintaada iyo qorista Dubai gudaha 2018 iyo 2019. Isla mar ahaantaana, waad iska diiwaan gelin kartaa khadka tooska ah. Ku dar resumeygaaga la-hawlgalayaashayada shaqaalaysiinta ee Imaaraadka Carabta. Waxaan u qoreynaa shaqo doonka magaalada Dubai. Shaqooyinka banaan ee riyada Dubai waa ujeeddadaada wanaag? Markaad tixraacdo qodobbadaas, waad yeelan doontaa waxay ubaahan yahiin in lagaa caawiyo sidii aad u heli lahayd Shaqooyinka Dubai iyo shirkadaha ugu fiican inay ka shaqeeyaan Dubai.
Safka hore, waad iska hubsan kartaa taas Waxaad ka heli doontaa shaqo magaalada Dubai. Gaar ahaan ka badan WhatsApp Gulf Groups. Kooxdayada shaqaaleysiinta, ma jiraan wax aad ka timi. Xitaa waad noqon kartaa booqashada Dubai sida shaqaale doonaya Filipino. Ama sida adag ee shaqo loogu helo Dubai waa noqon doontaa. Xaaladahaas oo kale, shirkadkayagu waxay ku siinaysaa talo shaqo ku raadinta Gacanka. Hadafkayagu waa inaan kaa caawinno in lagu meeleeyo UAE Dubai Shaqooyinka iyo waxay kaa caawinayaan inaad la xiriirto Agaasimeyaasha HR.
Dakhliga dheeraadka ah ee shaqada iyo shaqada, raadinta noqda mid adag. Laakiin iftiinka shaqooyinka magaalada Dubai, waa heshiis sahlan. Gaar ahaan haddii aad tahay haweenay u dhalatay Dubai. Xaqiiqdi waxaan kugula talin doonnaa sidii aad ula xiriiri laheyd shaqo bixiyeyaasha Imaaraatka. Oo aan aqoon fiican lahayn, way adag tahay. Guud ahaan marka la hadlayo, haddii aad adigu sameyso Dhiirrigelinta CV ee shaqooyinka Dubai fursadahaaga shaqo heliddu way kordhaysaa. Asalka, loo shaqeeyayaal cusub ayaa la heli karaa maalin kasta dadka qurbajoogta ah ee Hindiya iyo Pakistan.
Sida loo helo shirkad qorista ugu sareysa Bariga Dhexe
Qof kasta oo xirfadle ah oo doonaya inuu ugu fiican yahay. Laakiin ilaa shaqo ka raadi goobaha shaqo ee bannaanbaxyada shaqada ee Dubai. Waxaad hubaal ahaan u baahan doontaa inaad hesho khibrad fiican. Intaa waxaa dheer in la ogaado meesha laga helo hay'adaha cusub ee shaqada. Mid ka mid ah hababka ugu fiican ayaa ah ku soo biirida WhatsApp Recruiters ee UAE. Gaar ahaan haddii aad raadineyso dalabyo shaqo oo fulineed gudaha UAE. Qaar ka mid ah albaabbada shaqada ee UAE kuma siinayaan dareenka aad u baahan tahay. Falanqaynta ugu dambeysa, waxaad u baahan doontaa si feejignaan xoogan looga helo maamuleyaasha shaqaalaysiinta.
Si aad si kala duwan u dhigto, xirfaddaadii aad u fiicnayd waxay bilaabi kartaa hal maalin oo aan dib loo dhigin. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad hesho talooyinkeeda saxda ah ee ka timaadda maamulayaasha. Guud ahaan sida loo isticmaalo bogga shaqada si aad shaqo uga hesho Dubai. Mar labaad haddii aad leedahay khibrad wanaagsan. Tusaale ahaan, sida a iibiyaha Dubai, waxaad heli kartaa shaqo. Gaar ahaan iyada oo la yaab leh ganacsi khibrad. Xaqiiqdii, waad maamuli kartaa shaqo fiican oo laga siiyay Dubai.
Dhinaca kale shirkadaha qorista ee Dubai. Dhammaantood way ogyihiin xeerarka ku jira UAE. Sidaas, helista shaqo ku jirta Imaaraadka Carabta ubaahan dadaal. Dhinaca togan, kaliya halkaas ayey ku joogaan meel adiga ahaan booska wanaagsan. Sidaa darteed marna ha dhumin waqtigaaga, oo u dir codsi shaqo intii aad awoodid. Sababta oo ah shaqo ka raadinta wadamada Khaliijka qaadashada xaaladaha qaarkood ilaa dhawr bilood.
Shirkadaha Dubai waa ay ku adagtahay inay helaan shaqo raadiye
Markii aad booqanayso dalka Isutagga Imaraadka carabta si aad shaqo u hesho. Waxaad ka fikiri kartaa inaadan qabin geesinimo kugu filan si aad shaqo u hesho. Laakiin dhab ahaan, Hotelka Dubai oo raadinaya shaqo raadiye iyo NY jeer ayuu qoray wargeyskaas. Waxaa sidoo kale jira dhinaca xun ee Emirates. Mid ka mid ah tusaalooyinka ayaa ah in magaalada Dubai ay xoog ku yeelato qawaaniinta soo booqda. Sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida loola shaqeeyo UAE. Sababtoo ah khaladaadka qaar ayaa kaa joojin kara Bariga Dhexe weligiis.
Shirkadaha Dubai waxay shaqaaleysiinayaan United Arab Emirates. Si aad ula xiriirto iyaga waad sameyn kartaa taas iyada oo loo marayo taleefanka gacanta. Waqtiga dambe ama ka dib waxaad ogaan doontaa in ay dhab ahaantii kaa caawin karto in lagu meeleeyo UAE. Ilaa wakhtigan xaadirka ah, waad isticmaali kartaa Kooxaha WhatsApp ee Dubai in UAE laga helo shirkad shaqaalaysiin. Waxaan nahay halkan si aad uguxiriso qurbaha oo leh shirkadaha ugu kireeya Bariga Dhexe.
Mid ka mid ah adeegyada aan bixino waa Shaqooyinka Khaliijka ee Shaqooyinka Hindida. Waxaan nahay caawinta shaqo doonka adduunka si aad shaqo ugu hesho si dhakhso badan. Shirkadayada maareysa shaqada shaqada xisaabaadka warbaahinta bulshada. Dhejinta shaqooyinka cusub laga bilaabo wadamada khaliijka ilaa kuwa shaqo doonka ah. Waxaan sidoo kale uruurineynaa qoraal dheraad ah oo ku saabsan Shirkadaha Dubai.
Shirkadaha Dubai Dubai
Shirkadda Dubai City iyagoo siinaya macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan bartayada Dubay. Soogalootiga cusubi waxay ka helaan talooyin cajiib ah midkasta oo kamid ah qoraalkeena. Waayo khubaro cusub oo ka socda Dubai iyo Abu Dhabi. Imaatinka cusub ee UAE ayaa maareynaya hab nololeed wanaagsan oo ka socda UAE. Isbarbardhig dalal kasta oo shaqo ah. Imaaraadka Imaaraadka Carabta waa ugu fiican ee xirfadda iyo horumarinta ganacsiga.
Sidaas, haddii aad tahay raadinta shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay qurba-joogta Hindiya. Waxaan sidoo kale ka mid nahay kuwa ugu wanaagsan noocan ah dadka cajiibka ah. Xaqiiqdii, Annagu ma saarayno shaqo doon kasta in aan ka helayno khadka tooska ah. Waxaan codsiyo shaqo ka helnaa adduunka oo dhan. Laakiin waxaan awoodnaa kaliya inaan caawinno xoogaa cayiman oo shaqo doon ah. Waxaan si adag ula talinaynaa shaqaale cusub oo cusub si ay u isticmaalaan kooxaha Gulf WhatsApp. Kala hadal maamulayaasha shaqaaleynta iyo la xiriir dadka kale ee qurbo joogta ah. Sababtoo ah Dubai waa kuwa ugu fiican ee riyooyinka. Wax kasta oo aad sheegto ma jirto. Waxaan mar walba isku dayeynaa inaan caawino dadka shaqo doonka ah.
Nolosha Carabiga waa riyo u ah masaafurin. Markaad u booqato Imaaraad ahaan safar ahaan waad arki doontaa. Guryaha waaweyn, baabuurta isboortiga, iyo nolosha cagaaran. Qof kastaa wuu gaari karaa lacagtaasna wuu sameyn karaa. Shirkadeena waxay isku dayeysaa inay u gudbiso adeegga ugu wanaagsan ee suurta galka ugaarsadeyaasha. The Shaqooyinka Emirates ee loogu talagalay xirfadlayaal caalami ah. Adiga ayaa adiga ku sugaya gaar ahaan marka ay cusub tahay soo saar 2020 mashaariicdu gacanta ayey ka galeen.
Si aad wax badan uga ogaatid shirkadaha Dubai fadlan a fiiri kooxda WhatsApp ee kooxda. Waxaad ka heli kartaa dib u eegis dhowr ah ee shirkaddayada. Waxaa intaa dheer, waxaad ogaan kartaa sida aan u caawinnay shaqaale kale oo shaqo doon ah.
Sidee u heli kartaa shaqo ku saabsan blog-ka Dubai?
Dadka intiisa badani waxay moodayaan inay iyagu uun awoodaan shaqo hel goobta shaqada. Xaqiiqdii, habkan uma shaqeynayo. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa xoogaa talo ah oo ku saabsan qorista shaqooyinka Dubai iyo in ay xalliyaan dhibaatooyinka raadinta shaqadaada. Tusaale ahaan, waxaa jira dhowr qaybood oo aad shaqo ku heli kartid. Iyo waligood hoos u dhigin awoodda qorista taleefanka gacanta ee UAE.
Tusaale ahaan, si aad u bilowdo xirfadda bangiga waxaad u baahan tahay inaad gacanta ku haysatid qorshe faahfaahsan. Gaar ahaan hadaad tahay shaqo doon caalami ah oo si xoogan u doonaya inuu a Xirfadda Dubai Magaalada. Waxaan had iyo jeer gacanta siineynaa martida cusub. Tusaale ahaan oo ka soo jeeda Pakistan iyo raadinta shaqooyinka UAE. Waxaan shaqo ka dooneynaa Aasiya iyo Europe in Emirates oo leh heer aad u sarreeya ee guusha.
Dubai Blog for dadka ajnebiga ah ee ku saabsan helitaanka shaqo
Shirkadda Dubai City waxay siisaa macluumaad maareyn ah oo loogu talagay dadka ardayda ah. Inta badan booqdayaashu runtii way heli karaan si kastaba ha noqotee Talooyin ku saabsan habka nolosha ee UAE. Shirkadeena waxay bixisaa macluumaad faahfaahsan oo loogu talagalay dadka ajnebiga ah Gaar ahaan Hindiya iyo Pakistan. Waxaan ka caawineynaa sida loo helo wanaag shirkadaha qorista ee Dubai iyada oo Dubai City.
Shirkaddayada shaqaaleysiinta qorista ku saabsan dabeecadaha qaab nololeedka. Iyada oo la soo cusbooneysiiyey boosteejada blog-ka ee casriga ah waad ogaan kartaa sida loo raadsado shaqooyin iyo xirfadda UAE. Maqaalkeena waa mid wax ku ool ah si aad ugu codsato ugu dambeyntii Xirfadda Dubai City, Abu Dhabi, Sharjah iyo Emirates kale. Waxaad ka heli kartaa macluumaad badan oo ku saabsan Goobaha shaqada Magaalada Dubai iyo Imaatinka Imaatinka Shaqaalaha. Fadlan iska diiwaangali shirkadeena. Waxaan halkan u joognaa inaan kaa caawinno inaad wax dheeraad ah ka ogaato wax ku ool ah Dubai City.
Shaqooyinka iyo xirfadaha shaqo ee Dubai Blog
Shirkadda Dubai City ayaa hadda bixinaysa Tilmaamo wanaagsan oo loogu talo galay Xannaano-joogaha Dubay. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Sidaa daraadeed, arrintaan maskaxda ku haysa, waxaad hadda heli kartaa hage, talooyin iyo shaqo ku qoran Imaaraadka Imaaraadka Carabta adoo luuqaddaada ku hadlaya.